Chelsea oo horumar badan ka sameysay wada-xaajoodka heshiis kordhinta ee xiddig bartilmaameed u ah Real Madrid iyo PSG – Gool FM
Haaruun January 27, 2022
(London) 27 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa wali dadaallo badan ugu jirta inay qandaraaska u kordhiso xiddiga bartilmaameedka u ah kooxaha Real Madrid, Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich ee Antonio Rudiger.
Qandaraaska Rudiger ee garoonka Stamford Bridge ayaa dhici doona dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaase uu haatan ku dhowyahay inuu qandaraaska u kordhiyo Blues isagoo doonaya inuu kooxda usii ciyaaro.
Suxufiga ka tirsan majaladda Daily Telegraph ee Matt Law ayaa laga soo xigtay in Chelsea ay horumar fiican ka sameysay wada-xaajoodka heshiis kordhinta ay kula jirto wakiilka difaaca Jarmalka ah iyadoo labada dhinac ay aad ugu dhow yihiin inay ku heshiiyaan qandaraaska sii galbanaya ee dhici doono bartamaha sanadkan, inkastoo aysan jirin wax heshiis ah oo si rasmi ah loo gabagabeeyay.
Si kastaba ha ahaatee, 28-sano jirkan ayaa xor ah inuu la xaajood kooxaha ka dhisan dalalka kale isagoo xiiso badan ka helaya Los Blancoc, PSG iyo Bavarians oo dhammaantood doonaya adeeggiisa balse waxa uu u muuqdaa mid doonaya inuu baaqi kusii ahaado galbeedka magaalada London.
Petr Čech oo ammaanay qaab ciyaareedka goolhaaye Kepa, kaddib maqnaanshiyaha Mendy